Ifulethi eli-1 lokuqasha e-Salford, eGreater Manchester
Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » Greater Manchester » Salford » Salford » Ifulethi eli-1 lokuqasha e-Salford, eGreater Manchester1
United Kingdom, Greater Manchester, Salford, Salford, M5 4yw
Ikhodi Yokuposa: M5 4yw
Izici: Canalside living at Middlewood Locks, No Deposit/ Fees (subject to T\_u0026amp;Cs), Courtyard garden, Brand new fully furnished homes, Pet Friendly, Free Wi-Fi included, Residents clubroom, Neighbourhood Events, Secure Parking Available, Co-working space
Thola ukuqasha kwedolobha ngendlela ongakaze uyibone ngayo ngaphambili. Leli khaya elinemibhede engu-1 ngokugcwele liseNew Maker Yards, entuthuko entsha sha yaseMiddlewood Locks - ngaphesheya nje koMfula i-Irwell usuka eSpinningfields. Ihlinzeka ngokuhlala emseleni, okuhleliwe phakathi kwendawo eluhlaza kanye nezinsiza eziningi kusayithi, ibanga elingaphansi kwemizuzu emi-5 ukusuka eSalford Central. Ikhaya leplani elikhanyayo elitholakala kuphela kwaGet Living - umnikazi wendawo oklonyeliswe ngemiklomelo eminingi oshukumisile ILondon yokuqasha indawo ngensizakalo yayo evelele. Kuyingxenye yeqoqo lethu leSiginesha, isitayela saseScandinavia esine-oki elikhanyayo namathoni wemvelo: Indwangu engenalutho ongagxiviza kuyo ubuntu bakho. Kunezindlu zokugezela ezimbili ezinkulu (i-en-suite eyodwa) kanye nekhishi elihlome kahle elinehhavini elakhelwe ngaphakathi ne-induction hob. Njengesakhamuzi se-Get Living, wamukelekile ukuhlobisa wenze ikhaya lakho libe ngelakho, futhi nezindawo zeminyaka emithathu zokuhlala njengokujwayelekile , ungazinza impela. Ithimba lethu lisendaweni ezosiza ngokuphila kwansuku zonke nokugcina indawo, kufaka phakathi igceke labahlali elinokuthula, libukeka lilihle. Ungase futhi uhlanganyele egumbini lethu leklabhu uthathe iphuzu lakho emicimbini yabahlali bethu abajwayelekile
15 Middlewood Road, Salford
, M5 4yw
Izikole eziseduzane M5 4yw